Ya mere Ọkwa 27 amalite anya ezi ezuru, albeit a obere 'matriks’ na kwụsịtụrụ blocks. E nwere ihe ole na ole kemfe ndumodu na Atụmatụ maka na-ebe a na ogbo na ezi ọgụgụ nke napụtara anu ulo na a ezigbo ọnụ ọgụgụ nke kpakpando buut!
Nke mbụ niile ya mma ịmara na anu ulo na-abịa ala n'otu otu mgbe, Na nsogbu-eme ka ala ọzọ n'akụkụ nke ọzọ nke osisi ma ọ bụrụ na gị Pita bụ rapaara, ọ dị nnọọ wont ọrụ. Ọ bụrụ na gị Pita bụ na a Pịkụl agbalị ma sonyere blocks gburugburu ya ma ọ bụ ịhụ maka ụfọdụ nnukwu combos na-eji a firecracker!
Jiri gị balloons amamihe! E nwere nnọọ ole na ole acha balloons tụba gburugburu na nke a osisi na ha nwere ike ịbụ nnọọ kemfe. Jiri ha ikpochapụ blocks n'okpuru gị Pita ma ọ bụ iji sonyere elu bịara n'ikperé mmiri nke otu acha blocks. Naanị ihe dị mma karịa iji otu balloon-eme ka ụfọdụ nnukwu combos bụ iji abụọ (iche iche na agba …O doro anya na!)
Kwụsịtụrụ blocks onye ọ bụla?
Buru n'uche nke a n'ogo nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke Nkea, 60 N'eziokwu ma na ị nwere 8 anu ulo iji napụta otú na-'dilly dally’ ka a kacha nta, na-elekọta Business mbụ, nke a bụ egwuregwu bụghị playtime!
Firecrackers dị ka mgbe niile bụ ndị enyi gị, ma ọ bụrụ na ị na-akpata otu ihe ọ ga-eme ala a Pita, bụghị ọtụtụ ebe na-azọpụta ya ma ọ bụ na 'ezo ụbọchị’ ga n'elu gị tupu ị na-aghọta!
Ịhụ na-ewepụ ihe niile nke otu na agba ka akara nnukwu ihe, balloons bụ kemfe ma adịghị oké mkpa ime nke a. Isi atọ kpakpando bụ ọ dị mma ma na-uche gị mkpa bụ nnapụta ndị ogbenye obere anu ulo! Dị nnọọ ọrụ otu kọlụm n'oge na ị ga-enwe a mere n'oge na-adịghị. Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ Nkea fọdụrụ nke a ga-atụkwasịrị gị akara ma ọ bụ ị nwere ike ịtọ gị Pita elu mgbe ahụ na-arụ ọrụ na isi isi ihe ụfọdụ. Na-ị na anya oghe maka multiplier blocks! ha nwere ike ime nnukwu ihe dị iche gị akara karịsịa ma ọ bụrụ ị na ikpokọta ụfọdụ ọnụ!
Okodorode niile ma otu na agba pụrụ isi mee ka ụfọdụ nnukwu ihe isi!
Filed Under: Ọkwa 27, Uncategorized Tagged: Enyemaka, Ọkwa 27, Atụmatụ